Iibinta taleefannada gacanta ayaa mar labaad koray rubucii saddexaad | Androidsis
Iibinta taleefannada gacanta ayaa kordhay 1% rubucii saddexaad
Muddo dheer iibka taleefannada casriga ayaa hoos u dhacay adduunka. Isbeddel la filayo ayaa lagu celin doonaa sanadkan mar labaad, kahor sanadka 2020 waxay bilaabeen inay mar kale kacaan. Ka dib markii uu ku dhacay labadii rubuc ee ugu horreeyay sanadka, isbeddelkan ayaa si lama filaan ah u jabay rubuc saddexaad, halkaas oo koritaan yar la duubay.
1% koror ah iibka marka loo barbardhigo isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay. Waxay ka yaabisay dad badan, maaddaama noocyada badankood ay arkaan sida iibinta taleefannadooda casriga ahi u dhacaan. Laakiin markii ugu horreysay muddo labo sano ah waxaan ku aragnaa koritaan xagga macnaha ah, in kasta oo ay aad u yar tahay.
Marka loo eego tirooyinka cusub, 352 milyan oo telefoon ayaa la iibiyey adduunka oo dhan rubuc saddexaad ee sanadkan. Marka la barbardhigo, isla muddadaas sannadkii hore, iibka taleefannada gacanta ayaa ahaa 349 milyan. Marka kororkaan yar ee 3 milyan waa mid ka mid ah farxadaha yar ee ka jira suuqan.
Samsung waxay ku jirtaa booska koowaad oo ka mid ah noocyada ugu iibinta badan, qaybtooda suuqyada ayaa xitaa korodhay rubuckan saddexaad. In kasta oo Huawei yahay guuleystaha weyn, kuwaasoo iibkoodu sii kordhayo. Waad ku mahadsan tahay kororkan, waxay hadda uga dhawyihiin Samsung sidii hore.
Tan iyo markii Farqiga saamiga suuqa ayaa ah kaliya 3,9%. Markaa haddii iibka taleefannada casriga ahi sidan ku sii socdaan, dhawr bilood gudahood waxaan arki karnaa sida Huawei u yahay nooca ugu iibsiga fiican adduunka. Daqiiqad aysan dad badani u maleynin inay weligeed imaaneyso, laakiin taasi si tartiib tartiib ah ayey u soo dhowdahay.
Waan arki doonaa haddii kor u kaca iibkaan ee suuqa casriga ah uu soo noqnoqdo iyo in kale rubuca afaraad ee sanadkan. Sida laga soo xigtay saadaasha, 2019 wuxuu noqon lahaa sanadkii ugu dambeeyay ee hoos u dhaca iibka taleefannada, ka hor inta aysan mar kale kicin sannadka 2020. Marka isbadalkan waxaa laga yaabaa ama laga yaabo inuusan aheyn mid horey loo sii filay, goor dhow ayaan arki doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Iibinta taleefannada gacanta ayaa kordhay 1% rubucii saddexaad
Snapdragon 730G waa SoC loo doortay inuu awood u yeesho Xiaomi Mi CC9 Pro
Xiaomi Mi Note 10 Pro wuxuu adeegsan doonaa processor-ka ugu awoodda badan suuqa